The Apple Watch waxaa uma uu diyaarin inuu khaa'in aad iPhone hadda, weli ku dayashada ugu dambeeyay oo dhan keli ahaantayda ma samayn karo qayb ka mid ah laga cabsado: by waaweyn iyo kuwa aad ka tagto kartaa iPhone guriga. Akhri maqaalkan oo ay ka mid yihiin macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan Sida loo Adeegsado Apple Watch iyada oo aan La Bixin iPhone.
Dhawr codsiyada Apple Watch waxaa aad u kaliya tusay waxyaalahan u ordaya on your iPhone, iyo qaar ka mid ah warbixinta kooban ee muhiimka ah ma aha kuwo la heli karo fursad off in aadan isku aadiyo si qalab macruufka ah ee.
Noqo in sida laga yaabaa, waxa Watch samayn karaa tiirsan korkiisa oo gaar ah model aad leedahay. Tusaale ahaan, Watch ugu horeysay uusan haysan ururiyaha GPS a, sidaa darteed haddii aad telefoonka ma aha agagaarka aad raacin kartaa isa-soociddiisa oo aad baxeen ee la soo dhaafay tallaabooyinka la qiyaasayo. Hoose waxaan kuu soo hadli doonaa iyada oo loo marayo waxa Watch samayn karaa.
1 Sida loo Isticmaalka Apple Watch oo aan ka garab iPhone
1.1 Raad-Your Run
1.2 Raad-taga aad
1.3 Cusboonaysii codsiyada aad
1.5 Hel on diyaaradaha ama soo aragtaan filimada ah
1.6 Dhegayso music, Buugaag ama Podcasts
1.7 Raad-aad Fitness iyo Caafimaadka
2.1 Inbadan oo ka socda goobtayda
Sida loo Isticmaalka Apple Watch oo aan ka garab iPhone
On fursad off in aad leedahay a ah GPS-awood Apple Watch (Taxanaha 2 iyo wixii ka dambeeyey) aad raaci karaan orod adiga oo aan qaadashada taleefanka kula, iyo haysashada maskaxda ku haysaa in aad u ma sii qulquli karaan Apple Music on daydo non-gacantu waxa aad nuqul karaa music in aad watch oo taas waxaa maqli soo earbuds Bluetooth halka aad.
mid ka mid ah la joogo ay geli karin in ay Taxanaha 1 milkiilayaasha, nahay Cabsan: Watch ma aysan heli iska caabin biyaha ilaa Taxanaha 2, oo awoodna siiyaa inaad xidhato inta aad dabaalan.
dabaasha Apple ee u gaarka ah soo socda waa xoogaa asaasiga ah, weli waxaa jira xaddi weyn oo codsiyada dibada si loo waafajiyo shuruud kasta.
Cusboonaysii codsiyada aad
Original Apple Watch codsiyada ayaa aad u muujiyay kaliya: oo dhan codsiga dhab ah sameeyey shaqo on your iPhone oo si fudud Watch aad muujiyey natiijooyinka.
Taasi bedelay la watchOS 2, oo soo bandhigay codsiyada degaanka: in uu yahay, codsiyada in dhab ahaantii orday on Watch Apple ah.
All watchOS socda Apple soo jeedo 2 ama ka dib yeelan kartaa codsiyada dhiig taasi oo ka Wi-Fi, iyo codsiyada qaar ka mid ah sidaas oo kale ka heli kartaa in ay noqol taleefanka gacanta abaabulo on GPS + daydo gacanta.
Marka aad qotomisay Apple Pay on iPhone ee Watch codsiga, waxaad ku bixin kartaa, waayo, waxyaalaha aan filaya in aad iPhone waxtar leh. Taasi waa sabab ah in codsiga ka dhigaysa calaamo cajiib ah oo la iska fogeeya on Watch ee isticmaalka sida lambarka kaarka – aad u oggolaanayaan in ay isticmaalaan Apple Pay ee dhacdo kasta, marka aad ka fog telefoonka aad tahay.
Si aad lacag, asal ahaan ruxruxaa aad watch ee terminal Apple Pay-qumman oo ha awaamiir ah NFC (isgaarsiinta u dhow beerta) Radio ay wax samayn.
Hel on diyaaradaha ama soo aragtaan filimada ah
Salada Apple waa on Watch Apple ah, si wax hore iska fogeeya waxaa ku jira – tigidhada diyaaradda, tikidhada elektaroonigga ah iyo wax kasta oo kale oo la akhrin karo – Waa in shaqeeyaan ganaax iyo dandy adiga oo aan iPhone.
Waxaa murugo leh, ma ururada oo dhan tan oo Tumeeya, si aannu weli si joogta ah meandering wareegsan goobo iyo satchels raran caag ah, si kastaba ha ahaatee, waxaana logu wax dheeraad ah oo ku sii computer-.
Dhegayso music, Buugaag ama Podcasts
Watch waxay leedahay kaydinta gaar ah, qaar ka mid ah taas oo la heli karo, waayo music – si aad u isticmaali kartaa Watch ayaa la dhisay-in Bluetooth in labada nin oo laba ka mid ah samaacadaha fog iyo aad u hesho music dhaqaaqaan.
Caadi ahaan ma waxaad yeelan doontaa fursad u qulquli music ka adhaxda ka mid ah Spotify ama Apple Music aan model gacanta, weli waxaa jira in ay suurtogal tahay in loo baahdo laga yaabaa gudaha iyo kaydinta ordaa oo dhan, jimicsi ama drive gaaban. In kiiska tahay inaad isticmaasho Apple Music waxaad samayn kartaa playlists heli karo riisanayo on your Apple Watch.
Qaar ka mid ah codsiyada kale dibada sidaas oo kale samayn kara iyo sidoo, tusaale ahaan, Maqli karo si aad u keydin karaa cajalado buug aad on dusha.
Raad-aad Fitness iyo Caafimaadka
The Apple Watch ma u baahan tahay in labada ciyaaryahan aad iPhone in ay u baaraan aad garaaca ama jimicsiga: waxaa lagu keydin karaa macluumaad iyo u waafajinta codsiga Health marka aad ka orod ku soo laabto, wareegga ama kulan xarunta Hanafiga. Waxaa jira codsiyada fayoqabka dibada sidaas oo kala duwan la heli karo, tusaale ahaan, cuntada.
Taxanaha The 4 daydo waxyaabo qaado si weyn u sii la garaaca sii horumaray soo socda iyo meesha ay ku dhacaan xataa, kaas oo lagu daydo cell isticmaali karaan si ay uga digayaa shaqsiyaadka ku haboon in ay dhacdo in aad leedahay hoos u daran.
Read this article oo ay ku jiraan macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan Sida loo Isticmaalka Apple Watch aan isagaoo si iPhone. Halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan hawlaha kala duwan ee aad sameyn kartid adiga oo isticmaaleya isticmaale Apple Watch oo aan aaday in ay iPhone.
Soo Degso VPN Master For PC
Aloha Browser + VPN bilaash ah kombuyuutarka (Windows 7/8/10 / Mac)
Kala soo bax Turbo VPN kombuyutarka Windows 10, 7, 8 iyo Mac
Filed Under: download Facetime Tagged With: Sida loo Isticmaalka Apple Watch aan isagaoo si iPhone
TorrDroid – Torrent Downloader For PC Windows iyo MAC
StarMaker Wixii PC – Download Bilaash ah ee Windows 7, 8, 10 & Mac
Download Wanaagsan 'GBWhatsApp For PC Windows 7, 8, 10 iyo Mac
Diiwaanka DU ee PC, Mac iyo Windows Download